Koorsooyinka Top DAT Prep
Qof walba jecel yahay helitaanka wax for free, sababta ma Imtixaanka DAT free ah?! Waxaan soo ururiyeen qaar ka mid ah imtixaan free wada in hal liis laga heli karo qof kasta in ay qaataan. Waxay waxaa la bixiyaa dhowr shirkadaha udiyaarin DAT kala duwan iyo sidoo kale American Association ilkaha – kuwaas oo qoray iyo ayaaba DAT ah.
Inta badan oo ka mid ah imtixaan free waa soo gaaban imtixaanka tijaabada ah ee DAT ah oo dhab ah, laakiin adeego sidii khayraadka wanaagsan si ay u isticmaalaan si ay kuu siiso fikrad ah waxa DAT waxay u eg tahay. Kuwani waxa loo isticmaali karaa sida imtixaanka lagu ogaanayo in aad ku siin doonaa set saldhig dhibcaha in aad ku qiyaastaan ​​ayaa kartaa horumarka dhanka ah marka aad bilaabayso waxbarashada iyo diyaarinta DAT ah. Qaado hal hor inta aanad bilaabin waxbarashada si aad u arki karto horumar dhan waxbarashada si aad u hubiso in aad tahay marka aad u soo gaadho gool aad aad dhigay DAT ah.
Tan iyo markii ay jiraan baaritaano dhaqanka free badan la heli karo aad qaadan kartaa dhowr ama dhan oo iyaga ka dhan waxbarashada. Kuwani waa baaritaan wanaagsan dhaqanka si ay u tagaan in ka badan si ay kuu siiso fikrad heerka nooca iyo dhib su'aalo DAT iyo sidoo kale qaabka imtixaanka. Waxa kale oo aad noqon doontaa in ay ka shaqeeyaan maamulka waqtiga aad awoodo oo qayb muhiim ah oo aad ku guuleysato on DAT ah.
1. Tan waa baaritaan dhaqanka dhererka-buuxa ah ay bixiyaan ADA (American Dental Association). ADA The ayaaba DAT ee sidaas darteed ma jiro ilo ka fiican si aad u hesho imtixaanka barbaradka free ah ka. Dhinaca kale oo kaliya in ay baaritaan ku dhaqanka this waa in aan computer-ku saleysan sida DAT dhabta ah. Waxaad weli ay awoodaan si ay u helaan dareenka ah waxa DAT waxay noqon doonaan sida iyo in la hubiyo in aad naftaada waqtiga la saacad ah qayb kasta in la sameeyo sida ugu macquul ah sida ugu macquulsan. Guji halkan si ay u helaan imtixaanka barbaradka dhererka-buuxa ah oo lacag la'aan ah!
2. ADA ayaa sidoo kale la sii daayay baaritaan dhaqanka sareeen free. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay sababta ay tani waxay leedahay wax la sameeyo DAT ah, laakiin sareeen ah (Indhaha Test Admission) waa mid aad la mid ah DAT marka laga reebo aysan u ka mid ah qaybta PAT iyo waxa ay leedahay ah qaybta Physics dheeraad ah. Kale markaas in qaybaha haray ee imtixaanka yihiin iyo sidoo kale qaab iyo nooc oo su'aalo weydiiyay.
Just ka boodi Test Physics ku saabsan Imtixaanka iyo aad weli baaritaan lagu sameyn doonaa tababar weyn ee Survey of Sciences Dabiiciga ah, fahamka reading, iyo Tests Sabab u tiro ahaaneed. Ha dhibin isku dayaya in dhalin baaritaanka sida ay nidaamka sareeen dhaliyay xusay hoose ee imtixaanka barbaradka ah, laakiin weli hubiyo jawaabaha sida ay muhiimka ah jawaabta ay bixiyaan. Baaritaankaan waxaa sidoo kale waa ma computer ku salaysan si jiid aad saacad in sidoo kale waqtiga naftaada this mid ka mid ah. Guji halkan si ay u helaan imtixaanka barbarashada ee lacag la'aan ah!
3. Kaplan waxay bixisaa baaritaan dhaqanka DAT lacag la'aan qof walba oo aan waajib in ay isku qoraan mid ka mid ah koorsooyinka dib u eegis ay. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad iska diiwaan gelin dhacdo iyo saxiixdo online, laakiin ma aha in aad si aad u iibsato wax. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka dhaqanka this online iyo aad u hesho waayo-aragnimo dhab ah imtixaanka tababarka la software imtixaanka DAT la mid ah. Waxay sidoo kale ku siin doonaa warbixinta buundada in uu leeyahay burburka faahfaahsan oo ku saabsan sida aad u dhaliyay qayb kasta oo ka mid ah qaybta DAT ah.
Tan waa baaritaan dhaqanka weyn in ay qaataan, maxaa yeelay, waxaa la siin doonaa warbixin score dhabta ah kula dhibcaha laga bilaabo 0-30 sida on DAT dhabta ah. Waxaad isticmaali kartaa dhibcaha sida saldhig ah inay ku qiyaasto horumarkaaga oo dhan waxbarashada. Baro wax badan oo ku saabsan waxa Kaplan leeyahay in ay bixiyaan iyo waxaad ka heli doontaa link in ay booqdaan goobta iyo saxiixdo Imtixaanka free ah by gujinaya halkan!
4. Review Princeton The waxay bixisaa baaritaan dhaqanka DAT lacag la'aan qof walba oo aan waajib in ay isku qoraan mid ka mid ah koorsooyinka dib u eegis ay. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad iska diiwaan gelin dhacdo iyo saxiixdo online, laakiin ma aha in aad si aad u iibsato wax. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka dhaqanka this online iyo aad u hesho waayo-aragnimo dhab ah imtixaanka tababarka la software imtixaanka DAT la mid ah. Waxay sidoo kale ku siin doonaa warbixinta buundada in uu leeyahay burburka faahfaahsan oo ku saabsan sida aad u dhaliyay qayb kasta oo ka mid ah qaybta DAT ah.
Tan waa baaritaan dhaqanka weyn in ay qaataan, maxaa yeelay, waxaa la siin doonaa warbixin score dhabta ah kula dhibcaha laga bilaabo 0-30 sida on DAT dhabta ah. Waxaad isticmaali kartaa dhibcaha sida saldhig ah inay ku qiyaasto horumarkaaga oo dhan waxbarashada. Baro wax badan oo ku saabsan waxa Review Princeton waxa uu leeyahay in ay bixiyaan iyo waxaad ka heli doontaa link in ay booqdaan goobta iyo saxiixdo Imtixaanka free ah by gujinaya halkan!
5. Shirkada udiyaarin DAT Gold Standard waxay bixisaa baaritaan gaabisay dhaqanka lacag la'aan ah DAT ah. Waa ⅓ dhererka DAT dhabta ah, laakiin weli waxaa ka mid ah dhaqanka su'aalo ku saabsan oo dhan afar baaritaano ah DAT ah. Waxay bixiyaan imtixaanka si qof kasta oo aan waajib in ay iibsadaan wax kasta oo ka mid ah maaddooyinka dib u eegis ay. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad iska diiwaan gelin dhacdo iyo saxiixdo online. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka dhaqanka this online iyo aad u hesho waayo-aragnimo dhab ah imtixaanka tababarka la software imtixaanka DAT la mid ah. Waxay sidoo kale ku siin doonaa warbixinta buundada in uu leeyahay burburka faahfaahsan oo ku saabsan sida aad u dhaliyay qayb kasta oo ka mid ah qaybta DAT ah. sidoo kale lagu siin doonaa helitaanka 1 saac oo lacag la'aan ah lagu barto videos for Survey imtixaanka Sciences Dabiiciga ah.
Tan waa baaritaan dhaqanka weyn in ay qaataan, maxaa yeelay, waxaa la siin doonaa warbixin score dhabta ah kula dhibcaha laga bilaabo 0-30 sida on DAT dhabta ah. Waxaad isticmaali kartaa dhibcaha sida saldhig ah inay ku qiyaasto horumarkaaga oo dhan waxbarashada. Dhinaca kale oo kaliya waa in imtixaanka this waa la soo gaabiyey oo aan wakiil buuxa oo DAT dhabta ah. Riix halkan si ay u helaan imtixaanka barbarashada ee lacag la'aan ah!
Ma jiraan wax ka fiican markaas wax helitaanka for free, laakiin free sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay inaad helayso wax ka mid ah tayada yar haddii kale maxaad kale oo aad u heli lahayd for free?! Taasi waa waxa aad helayso leh, kuwaas oo baaritaano lacag la'aan ah dhaqanka. Waxay weyn in ay tahay iyo waxaan ku talinaynaa lahaa qaadashada ugu yaraan hal ama laba ka mid ah haddii aad jeceshahay, laakiin in my opinion, kuwaas oo baaritaano lacag la'aan ah ma beddelo baahida inay qaataan imtixaanada dhaqanka dhererka-buuxa ku jira koorsooyinka dib u eegis sida Kaplan, Review Princeton The, ama koorsooyin kale DAT in aad leedahay si loogu bixiyo. Fiiri aan Marka la barbardhigo tartanka DAT si ay u bartaan taas oo adiga kuu wanaagsan.
Aadan helin tababar la mid ah, waayo-aragnimo, ama natiijada by qaadashada kuwaas oo baaritaano lacag la'aan ah sida aad u samayn qaadashada imtixaanka dhererka-buuxa ah in aad leedahay si loogu bixiyo. Waxaan u soo jeedin in aad qaadato ugu yaraan hal imtixaan tababar lacag la'aan ah si ay ugu adeegaan sida baaritaanka lagu ogaanayo in ay bilaabaan waxbarashada. Markaas sida aad waxbarashada iyo diyaarinta DAT ah, qaataan imtixaanada kale dhererka buuxa dhaqanka ah in aad iska bixiso si aad wax dheeraad ah ku filan loo diyaarin kartaa DAT ah.